Burcad Badeed Soomaali ah oo lagu qabtay Xeebaha wadanka Kenya – SBC
Burcad Badeed Soomaali ah oo lagu qabtay Xeebaha wadanka Kenya
Posted by Webmaster on October 5, 2011 Comments
Marakiib Dagaal oo ay leeyihiin Wadamada Tanzania, Kenya, South Africa, Mozambique iyo Zimbabwe ayaa gacanta ku dhigay 7 qof oo Burcad badeed Soomaali ah kuwaasi oo howlgal ka waday Xeebah Kulaala wadanka Kenya.
Ciidamada Burcad badedan qabtay ayaa ku jiray howlgalo tababar ah oo ay ku sameynayeen Xeebaha dhulkooda waxaana intii ay ku jireen howsha ay la kulmeen fariin gargaar dalbasho ah oo ka timid maraakiib dhowr ah oo mareysay xeebaha ay ku sugnaayeen agtooda.
Madaxa Badmaaxiinta ee Dalka southafrika Karl Wieswer ayaa wariyaasha u sheegay inqabashadan ay dhacday ka dib markii fariin caawimaad ah uu soo dirsday mid ka mid ah maraakiibta ku goosheysay Biyaha Kenya u dhow waxana uu sheegay in howlgalka ay ku jireen uu ahaa mid ilaalinta xeebaha ah.
Burcad badeedan la qabtay waxaa laga babaadiyay Markab Nooca shidaalka qaada oo la yiraahdo SAM-S-ALL GOOD kaasi oo ay leedahay shirkada dhinaca batroolka ka shaqeysa.
Kooxda la qabtay sidoo kale waxay weerareen Maraakiib kale oo ganacsi kuwaasi oo marayay Meel aan ka fogeyn goobta laga qabtay.
Burcada haatan la hayo oo gaaray 7 ruux oo soomaali ah waxaa lagu qabtay hub kala duwan oo ay ku geysan rabeen weerarka waxaana ku jiray 16 qoryaha fudud ah Bambooyin iyo hubka garbaha laga tuuro oo ay ku joojiyaan gadiid badeedka.
Ciidamada wadamadan ee qabtay Burcad badeeda Soomaalida ayaa ku heshiiyay inay si wada jir ah xeebahooda iyo gadiidkooda uga dhiciyaan Burcad badeeda Soomaalida ee ka qowleysata Xeebaha Caalamiga gaar ahaan kuwa Gobolka.
Burcada haatan la qabtay waxay ku biireysaa 18 nin oo burcad ahaan loo qabtay oo wadankaTanzania ku xiran kuwaasi oo sugaya in sharciga la horgeeyo si loogu soo bandhigo eedeymaha loo haysto.